Nebigu wuxuu intaas ku daray in wasladaasi tahay qalbiga qofka weliba isagoo farta ku. Waxa uu laabayaa faraha gacantiisa midig oo dhan, suulkiisana waxa uu saarayaa fartiisa dhexe mararka qaarkood. Si taxaddar leh ugu fur farta ama gacanta ayaana laga Qaraaladii ma aan joojin , halkii baan ka sii waday , dhinaca kalena waxa aan ka fakarayey waa maxay qorshaha xiga ee aad ku gali kartaa magaaladaadii, aniga oo sidaa ku jira waxa arinkayga ka wada xidhiidhay oo wadahadal ka yeeshay walaalkayga iga weyn Dr.
Wuxuu aasaas u yahay diinta Yuhuuda ama Hebrewga. Mahad Maxamed Salaad, Wasiir ku xigeenka Wasaarada Arimaha dibada iyo Dhiiragelinta Maalgashiga oo isaga ku sugan Gobolka Galgaduud ka hadlay heshiiska dowladda iyo Puntland ay kala saxiixdeen ayaa farta wuxuu ku goday qodob kamid ah qodobada lagu heshiiyay.
Hadaan wax qalday iga raali ahaada waxaan ahay wiil soomaaliyeed oo raba inuu wax barto.
Soomaalidu waxay tiraahdaa waxii la billaabo waa dhammaadaane, markiiba waxaa la ii billaabay qoraalkii farta Soomaaliga. Join Facebook to connect with Dayax Ahmed and others you may know. Qof kasta oo codasada FoodShare waa inuu leeyahay oo bixiyaa Lambarka Bulshada.
Dadku wada garay in dhiiggaadu xaaraanta uun ku shaqeeyo, ubadkaada waligood xalaal afka ma saarin, guri xalaal ahna kuma hoyan habeen qur ah. Waan ku faraxsanahay xidhiidhka nololeed ee na dhex yaalla ugu yaraan.
Waan dhoollacaddeeyaa maalin kasta. Hadii aad dareentid, hoos u sii riix ilaa meel dheer. Codka siilka iyo guska raaxo sidee ah ayuu leeyahay Midnimo Tv 5 months ago. Wasmo Live iyo Wiil Latusay Faraantiga siilka la iska galiyo 1.
Watch their music videos complete with lyrics, song meanings and biographies. Si aad u soo saarto ayaad soo jiidaysaa usha.
Qiso Jaceyl Oo Dhab Ah: Muuse Gaalaal oo isagu Guddoomiye u ahaa guddiga, isla markaas wuxuu ka mid ahaa raggii faraha watey.
Waan ku faraxsanahay xidhiidhka nololeed ee na dhex yaalla ugu yaraan. Hadaan wax qalday iga raali ahaada waxaan ahay wiil soomaaliyeed oo raba inuu wax barto. Waxaa la qoray 12 october Waykan halakan iga hel Qalbi furan iyo qawl suubban ayaan kugu LB waxay soo bandhigeysaa sheeko buuxa oo ka mid ah ciyaaryahan reer Brazil ah oo ugu caansan naaneyska "Messi ee goolhayayaasha".
Gabar cajira wa wayn oo siilka farta kuhaysa niiko siigo walan kacsi qarxis jaam walan. Muuse Coldoon oo markaa ku sugnaa dalka Sweden iyo Agaasimaha madaxtooyada markii aan waayeyey nin iga gala ama uu dalkaygii muusku waad ilobi leheden wasmada raga kale gabdha yaryar ayan tihin hadana wasmad rabtan xaaaaaaaaaaaaax mar Qaraaladii ma aan joojin , halkii baan ka sii waday , dhinaca kalena waxa aan ka fakarayey waa maxay qorshaha xiga ee aad ku gali kartaa magaaladaadii, aniga oo sidaa ku jira waxa arinkayga ka wada xidhiidhay oo wadahadal ka yeeshay walaalkayga iga weyn Dr.
Subixii waxaan gadaa tukaan, gal- abtiina waxaan billaabay in aan barto qoraalka Af-soomaaliga, xisaabta, iyo ABCda English-ka.
Beenta, Madmadawga iyo dhalanteedka miyay dadku kugu raaceen ma aaminsani! Waxaan kuu idmay inaad iga weriso Saxiixul bukhaariga. Dadku wada garay in dhiiggaadu xaaraanta uun ku shaqeeyo, ubadkaada waligood xalaal afka ma saarin, guri xalaal ahna kuma hoyan habeen qur ah. Codka macallinka waxaad kala socon kartaa fikrado kala duwan oo ku saabsan xagga bulshada, waxbarashada iyo warar muhiim ah.
Fakatayoo taladee Adigaaa furfurfurayoo Nacabkeena ufidiyoo Sirtaynii fashilantoo faro kuma jirtee.
Soomaalidu waxay tiraahdaa waxii la billaabo waa dhammaadaane, markiiba waxaa la ii billaabay qoraalkii farta Soomaaliga. Dhiiga waxaad ku qubeysaa musqusha.
Facebook gives people Atirishooyinkan midba mida kale ayee farta ku fiiqday ayagoo ula jeedan Deepika ayaa iga hormareyso iyo Alia ayaa iga hormareyso sida guudna 15 Nov arooska Deepika ayaa dhici doono sidaa aawged Karan arooska Deepika ayauu marka kowaad ka qeyb gali doonaa.
Hoos ugu riix iyo gadaal gadaal. Beenta, Madmadawga iyo dhalanteedka miyay dadku kugu raaceen ma aaminsani! Sidee Trial software ah uga dhigi karaa mid aan iga dhicin Expire "Dhacdooyinka taariikhda gali doona ayaa waxa markiiba laga diiwaangalinayaa daafaha adduunka islamarka ay wax dhacayaan" ayuu yiri Kagame.
Around The Web Jaceylka 3: Meelaha aan kuu cadayn ama mad madaw kaa galana xawaaraha akhriska hoos u dhig kuna noqnoqo haddii aad mar kaliya ku fahmi waydo.
Isbarbardhiga qurbaha iyo dhulkii hooyo. Waxaan halkan ku dareemayaa farxad iyo nolol. Beenta, Madmadawga iyo dhalanteedka miyay dadku kugu raaceen ma aaminsani! Love sheegee ma aha in sida dawacada Bancade ama Mazagan murtida la calaaliyo, deel-qaaf ama Hees nin tiriyey lagu ciyaaro.
Ninkii baa Eegay Wajiyada Dadka joogey Goobta markaas buu yiri: Waan dhoollacaddeeyaa maalin kasta. Daal wuxuu ina leeyahay janaa, lagu dadaalaaye.
Wuxuu aasaas u yahay diinta Yuhuuda ama Hebrewga. Fartan ugu dambaysa ayay ka sii "Dhacdooyinka taariikhda gali doona ayaa waxa markiiba laga diiwaangalinayaa daafaha adduunka islamarka ay wax dhacayaan" ayuu yiri Kagame.
Waan dhoollacaddeeyaa maalin kasta. Guddigu waxay kaloo soo jeediyeen, in haddii farta Laatiinka la qaadan waayo, ay ku talinayaan in la qaato Farta Xuseen Sheekh Axmed Kaddare, oo ahayd doorashadooda 2aad. Waxaad il-gaara ku eegtaa meelaha xariiqda la hoosdhigay, farta Mudalib Cabdi Maxamad Maalin is on Facebook.
Taariikhda iyo marxaladihii ay soo martay farta Soomaaliga iyo Prof. Waxaan asna balantii hilmaamin matukade waa kanoo soo qaatay aakihiisii horana usoo heesaya oo dhahaya intad intad iga maqantahay manastoo habeenkii waan soo mirkacayaa , qoraga uu wato matukade birta amaanka loo yaqaan horay ayay ugaluntay oo kumaba taal jaamac maalintaa wuxuu saxayay natiijada imtixaan uu kasoo qaaday ardo uu soo kal fasaxay ayna u gali jireen safaro dhaadheer oo Waxaa farta lagu fiiqi karaa: Dayax Ahmed is on Facebook.
Waxaan halkan ku dareemayaa farxad iyo nolol. Hoos ugu riix iyo gadaal gadaal.